Jaangooyooyin: Taariikhdooda, Midkee la Xulayaa, iyo Meesha Cagaha ee Saxda ah | Fardaha Noti
Qalalaasaha ayaa ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah fuulitaanka fuulka marka ay timaado ilaalinta dheelitirka faraska. Waa qayb muhiim u ah nabadgelyada wadaha, culayska ayaa saaran.
Sidaa darteed, xulashada walaaqayaashu waa lama huraan, iyo sidoo kale booska saxda ah ee cagta. Aan wax yar ka aragno dhammaantood!
Mid kasta oo ka mid ah edbinta raacitaanka, booska cagtu waa inay sax ahaataa Si loo ilaaliyo dheelitirka, gabal muhiim ah ayaa halkan ku lug leh: qaswadayaasha. Waa inaad cagta marisaa oo aad walaaq ku qaaddaa cidhifka cagta.
Marka walaaqiyaha si wanaagsan loo habeeyo, wuxuu gaarayaa lafta canqowga wuxuuna u oggolaanayaa lugta inay si xor ah uga laalaato kursiga. Halkan waxay ku imaaneysaa ciyaar si loo hubiyo in ficilada uu ka laalaado walaaqayaashu ay leeyihiin dherer ku habboon qofka fuushan.
Wax muhiim ah in lagu xisaabtamo kicinta, ayaa ah waligaa ha uga tagin iyaga oo laalaada ilaa aad fuusho mooyee, maadaama ay dhaawici karaan faraska adoo ku garaacaya ama wax ku qabanaya. Waxa ugu habboon ayaa ah lku qaado iyaga oo xiraya iyaga oo kor u saraya una gudbinaya falka u dhexeeya si aad u sugto.
1 Rabshadaha waqti ka dib
1.1 Sidee buu kiciyayaashu ku yimaadeen?
2 Noocyada walaaqaya
2.1 Noocyada caadiga ah ama Ingiriisiga
2.4 Nooca qaloocsan ama qafis
Rabshadaha waqti ka dib
Sanadihii la soo dhaafay, walaaqayaashu qaab ahaan iyo qalab ahaanba ayey isu beddelayeen. Gaaritaanka dhibic meesha tartameyaasha tartanka laftooda, oo ay weheliyaan soo saarayaasha hormoodka ka ah suuqa fardaha, ayaa soo saaray alaabooyin halkaas oo ay ku dhejiyeen dhammaan khibradooda shaqsiyadeed iyo xirfadeed, kordhinta amniga, raaxada iyo tayada.
Sidee buu kiciyayaashu ku yimaadeen?
Waqtiga qaar ka mid ah Qarnigii XNUMXaad ee xilligeenna, ayaa loo qaabeeyey iyo bilaabay in laga isticmaalo Shiinaha qaar taageerooyinka cagta ee fududeyn doona taageerada fuulitaanka ilaa faraska. Waa la qabtay birta lagu shubay iyo waliba qaar naxaas ah waxayna ahaayeen lagu xiray xarig.
Si kastaba ha noqotee, qulqulatooyin hore oo lahaa qaab wareeg ayaa la yaqaan oo lagu matalaa farshaxanka Hindiya horaantii qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor. Kuwani hore ee walaaqayaasha, waxay noqon karaan kuwo aad u dabacsan oo waxay umuuqatay in loo isticmaali jiray in lagu dhajiyo oo kaliya, iyo, dhinaca kale, kuwa kale oo qaabkooda iyo matalaadooda ay soo jeedinayaan in kaliya suulka weyn la geliyay. Si kastaba ha noqotee, lama oga hubaal haddii walxahaani matalayaan sawirradii hore ee farshaxanka Hindida, ay runti ahaayeen kuwo kacsan.
Hal-abuurnimadan ayaa sii faafaysay muddo kadib. Cadho waxay caan ku ahaayeen qarnigii XNUMXaad qaar ka mid ah shucuubta Aasiya, gaar ahaan Avars, kuwaas oo iyaga faafinayay.
Marka hore Walaaqayaasha 'Avarian' waxay ahaayeen qaybo wareegsan oo sagxadda hoose la simay si aad si fiican ugu taageerto cagta. Waxay sidoo kale lahaayeen nooc ka mid ah carrabka daloolka leh ee dusha sare, halkaasoo ay kaga xirnayd suunka hakinta Culimada qaar ayaa ku andacoonaya taas qulqulayayaashu waxay Galbeedka uga yimaadeen gacanta Avars, markay kuwani ku jiraan Qarnigii XNUMXaad waxay yimaadeen Boqortooyadii Byzantine. Franksku si dhakhso leh ayey ugu biireen inay ku daraan qaybtaan koorsooyinkooda.
Dad badan ayaa qiimeeyay faa'iidooyinka isticmaalka walaaqa. Cunsurkaan, wuxuu ka caawiyey fuulitaanka inuu si weyn u xakameeyo xayawaanka raacid. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo masuul ka ah ilaalinta xasiloonida wadaha, waxay bixisay a saxsanaanta weyn marka fallaadhaha laga tooganayo faraska oo la fududeeyo adeegsiga seefaha ama hubka kale. Sidaa darteed, hal-abuurnimadani waxay kaloo ahayd horumar xagga dagaalka ah.
Laga soo bilaabo qarnigii sagaalaad waxaa jira caddayn matalaadyo badan oo kiciyayaal ah oo Yurub ka jira.
Suurtagal maaha in la muujiyo walaaqa ka fiican tan iyo dhadhanka mid kasta oo ciyaarta soo gala. Haddii aan ku siin karno xoogaa talo bixinno ah waxa aan u maleyneyno inuu qasad wanaagsan leeyahay.
Waxa muhiimka ah marka la dooranayo walaaqa waa taas siiso taageero guud cagaha, si aan waxba u dhaqaaqin haba yaraatee si uusan fuulku u ka walwalin booska saxda ah ee saxda ah oo uu diirada saaro fuulitaanka. Dareenkan oo ku jira Ballaca lagu taliyay wuxuu kudhowaad yahay 1cm dhinac kasta oo cagta ah. Qalab aad u ballaadhan oo cagtu ku siibanayso iyo mid cidhiidhiga cagta ayaa xannibi lahaa haddii ay dhacdo dhicitaan, wax aad khatar ugu ah wadaha.
Intaa waxaa dheer, ballaca waa in la hubiyaa in Hal caag ah si fiican ayaa loo hagaajiyaa maadaama cunsurkan uu yahay midka ka celinaya cagtu inay siibato. Macluumaad kale oo muhiim ah ayaa ah Naqshadeedu waxay dammaanad ka qaadaysaa sii-deynta cagaha fuulitaanka haddii ay dhacdo dhicitaan.
Faahfaahin kale oo xiiso leh ayaa ah walaaqa miisaan yeeshaan, qiyaastii 3 kg. si hadday dhacdo in lasii daayo jihada loo tuuro sida kuwa kiciya ee miisaankoodu aad u yar yahay. Sidaa darteed fuushanku si fudud ayuu u soo ceshan karaa.
Aynu hadda aragno noocyada kicinta ee aan ka heli karno:
Noocyada caadiga ah ama Ingiriisiga
Iyagu waa kuwa ugu isticmaalka badan tan iyo markii naqshadoodu ay ku habboon tahay dhammaan dhinacyada kala duwan, marka laga reebo tartanka. Iskuxidhka caadiga ah waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo isku dhafan silsilado caag ah.
Iibso - Wax alaab ah lama helin.
Waxyaabahani waxay ku darayaan naqshadooda naqshad caag ah oo ku xidhan banaanka si hadday dhacdo dhicis cag fuula si dhakhso leh oo fudud loo sii daayo. Haddii dhicitaan dhaco, cinjirkani wuu soo degi doonaa ama wuu jabi doonaa, lugta ayuu sii deyn doonaa
Iibso - Kiciyeyaasha amniga
Astaamihiisu waa in nashqadeyntiisa ay ka dhigeyso ciribta mid ka hooseysa caarada cagta. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in jeex jeexka ay suntu ka soo gudubto ay ku barakaceen gudaha oo laamaha walaaqa ay hore u janjeeraan.
Laanta Australia ee fudud ama ruxruxda
Laanta banaanka ee walaaqiyaha waa ruxruxaa, tani waxay ka hortageysaa cag fuula inuu xayirmo haddii ay dhacdo dhicitaan.
Nooca qaloocsan ama qafis
Waxay leeyihiin leexasho ama qafis horay u jeeda. Noocan walaaqayaha ah ayaa lagula talinayaa kuwa u muuqda inay aad u xidhaan walaaqa.
Iibso - Qalab qallooca
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Stirrups: taariikhdooda, midka la dooranayo iyo booska saxda ah ee lugta